बम विस्फोटमा दुई जना घाईते
भरतपुरमा गठबन्धनको अग्रता कायमै
६ कार्तिक २०७८, शनिबार १९:०३ प्रकाशित
सुर्खेत । वेवासिरे अवस्थामा छाडिएको वम विस्फोटहुँदा सुर्खेतमा दुई जना घाइते भएका छन् । वीरेन्द्रनगर–७ कटकुवा सामुदायिक वनमा घाँस दाउरा संकलन गर्ने क्रममा वेवारिसे वम विस्फोटहुँदा दुई जना घाइते भएका हुन् । घाइते हुनेमा वीरेन्द्रनगरका १४ वर्षीय नरेश नेपाली र गुराँस गाउँपालिका–६ दैलेखका २१ वर्षीय लिला परियार छन् ।
उनीहरुको देउती अस्पतालमा सामान्य उपचारपछि थप उपचारको लागि आँखा अस्पताल लगिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता रामप्रसाद घर्तीले जानकारी दिए । मुखमा छर्रा लागेकाले नरेशको आँखा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । नेपाली सेनाले केही समय पहिले कटकुवा क्षेत्रमा अस्थायी तालिम सञ्चालन गरेकाले सो क्रममा वम छुटेको हुनसक्ने स्थानीयको आशंका छ ।
हरेक शनिवार साे सामुदायिक वन सार्वसाधारणका लागि खुला गरिने भएकाेले उनीहरू घाँस दाउरा लिन गएकाे बेला वेवारिसे वममा दवाव भएपछि विस्फाेट भएकाे हुन सक्ने प्रहरीकाे अनुमान छ । तर घटनाबारे प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।
१. भरतपुरमा गठबन्धनको अग्रता कायमै
२. सुनको मूल्य प्रतितोला ९६ हजार ७००
३. नौ मतदान केन्द्रमा आज मतदान
४. बालेन साह र केशव स्थापितबीचको मतान्तर कति ?
५. कांग्रेस ५४ र एमाले ४१ पालिकामा विजयी